Ikhaya loXolo-Ukuhlala kwakho eTay Ninh
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguBình
Igumbi labucala eliphangaleleyo elinebalcony apho unokujonga kwezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi: Mount Black Virgin (20 mins) kunye neCao Dai Temple (8 mins). Indawo yethu isembindini weDolophu eNgcwele ekuthatha nje imizuzu emi-2 ukuya kwiMarike esembindini. Indawo ejikelezileyo izele yimithi kunye neendawo zabahlali. Siyavuya ukutshintshisa inkolo yethu yeCaodaism kunye nenkcubeko kunye neendwendwe emhlabeni jikelele. I-Homecook kunye namava asekuhlaleni alungiselelwe kakuhle kwaye amkelwe.
Igumbi lakho lokulala labucala:
- Igumbi eliphangaleleyo kumgangatho we-2
-I-air conditioner yanamhlanje
-Indawo eninzi yegunjana
-Imbono yefestile eluhlaza
+ Embindini: imizuzu emi-2 ukuya kwintengiso yasekhaya, imizuzu eyi-8 ukuya kwiTempile eNgcwele yaseCao Dai, imizuzu engama-20 ukuya eMount Black Virgin
+ Indlela ethe ngqo ukusuka ukuya kwisiXeko saseHo Chi Minh: imiz emi-2 ukusuka kwisikhululo sebhasi, ukufikelela ngokulula ngesithuthuthu / imoto
+ Ukufika nge: minibus, iteksi, izithuthuthu.
+Iindawo ezidumileyo: Cao Dai Holy See, Mount Black Virgin, Go Ken Buddhist Temple, Cu Chi Tunnel
-Iindawo zesikolo apho unokudibana kwaye uthethe nabafundi bendawo kwaye ubancede baphucule isiNgesi sabo.
-Iilali zezandla zemveli ukuze ube nokujonga indlela umsebenzi waseVietnam kwakudala.
-2 izibhedlele ezikufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Bình
● Isikhokhelo esineenkcukacha siya kunikezelwa kuwe kwiigugu ezifihliweyo edolophini: isitalato sasebusuku sokwenyani esinokutya & neziselo, iindawo zokuthenga zasekuhlaleni, idolophu yezandla zemveli kunye neevenkile ezininzi zekofu zegadi.
● Musa ukuxhalaba ukuba abantu basekhaya abathethi isiNgesi, ndiya kukufundisa amagama aqhelekileyo aseVietnam aya kukunceda ukuba uphile apha.
● Abantu basekuhlaleni banobuhlobo kwaye bavuleleke ngeengqondo ukuze ukwazi ukunxibelelana kakuhle – kuxhomekeke kubuchule bakho bolwimi lomzimba.
● Isikhokhelo esineenkcukacha siya kunikezelwa kuwe kwiigugu ezifihliweyo edolophini: isitalato sasebusuku sokwenyani esinokutya & neziselo, iindawo zokuthenga zasekuhlaleni, idolo…